फेसबुकमा आफूलाई कसैले अनफ्रेन्ड गरेको कसरी थाहा पाउने ?
काठमाडौं । हामीलाई कसैले फेसबुकबाट अनफ्रेन्ड गरेको कुरा पत्तै हुँदैन । यो कुरा फेसबुकबाट थाहा पाइँदैन ।
तर, अब भने हामीलाई फेसबुकमा जो कोहीले अनफ्रेन्ड गरेपनि सहजै पत्ता लाग्ने भएको छ । त्यसको लागि मोबाइलमा रहेको प्लेस्टोरमा गई who unfriend me भन्ने एप्स डाउन्लोड....
​कृषि यन्त्र प्रदर्शनी धरानमा
धरान । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर धरानमा तेस्रो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी–२०७४ हुने भएको छ ।
कृषि विभागअन्तर्गतको कृषि इञ्जिनियरिङ निर्देशनालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघले संयुक्तरुपमा फागुनको १० गतेदेखि १३ गतेसम्म कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको नेपाल....
सामसुङले बीचबाटै पट्याउन सकिने स्मार्टफोन निर्माण गर्ने
काठमाण्डौं । सामसुङले ‘ग्यालेक्सी एक्स’ नामक नयाँ स्मार्टफोन उत्पादनको तयारी गरिरहेको छ ।
सामसुङको ग्यालेक्सी एक्स पहिलो फोल्डेबल स्मार्टफोन हुने दाबी पनि गरिएको छ । यस डिभाइसको बारेमा कुनै आधिकारिक घोषणा सामसुङले हालसम्म नगरेता पनि सामसुङको नयाँ प्याटेन्टको विश्लेषण गरी उसले ल्याउने तयारी गरिरहेको....
​आज रातभर टेलिकमको सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आज रातभर टेलिकमका मोबाइलबाट भ्वाइस, एसएमएस र रिचार्ज सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने जनाएको छ ।
टेलिकमका अनुसार कम्पनीको ल्यान्डलाइन टेलिफोनको विद्यमान बिलिङ सिस्टमलाई माइग्रेस गर्ने काम हुने भएकोले आज राति ११ बजेदेखि भोलि बिहान ५ बजेसम्म सेवा अवरुद्ध हुनसक्छन् ।
फेसबुकले गर्यो समाचार कम देखाउने निर्णय, निर्णयसँगै ६ प्रतिशतले घट्यो शेयरमूल्य
काठमाडौं । समाचार, व्यवसायिक ब्राण्ड तथा मिडिया सम्बन्धीको फीडका मामलामा फेसबुकले विशेष परिवर्तन गरेको छ ।
गत बिहीबार युजरका साथीको कन्टेन्टलाई ध्यान केन्द्रित हुने गरी न्युज फिडमा ठुलो परिवर्तन गरेको फेसबुकले केही घण्टामै अर्बौँ डलर गुमाउनुपरेको छ । शुक्रबार स्टक बजारमा उसको सेयर मूल्यमा....
नेपाल चीनको इन्टरनेट सञ्जालमा जोडियो, भारतको एकाधिकार तोडियो
न्यूजलय बुधबार २६, पुष २०७४
इन्टरनेटमा जोडिने भाका पटक–पटक भाका सार्दै आएको नेपाल टेलिकमले अन्ततः चीनसँगको अन्तरदेशीय इन्टरनेट लिंकको सफल परीक्षण गरेको छ ।....
​के तपाईँको फोनमा यस्ता एपहरु छन् ? सावधान ! फोन बिग्रेला
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूले फोनमा अनेकौं एप भरेर राख्छन् । यीमध्ये धेरै एप कुनै खास कामका लागि हुन्छन् तर तिनले आफ्नो काम नगरेर फोनलाई नै नोक्सान पुर्याइरहेका हुन्छन् ।
फोनबाट जंक आइटम हटाएर ब्याट्री बचाउने दाबी गर्ने यो एपले फोनलाई हानि....